ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: စပ်မိစပ်ရာ ....၁/၂/၃/၄
အစ်ကိုမောင်မျိုးရေ အစ်ကို့ Post ကိုဖတ်နေတုန်းရှိသေးတယ် စိတ်ဆိုးစရာပေါ်လာတယ်ဗျာ။ ၁၂၃၄ ရေပြီး တော်တော်ထိန်းလိုက်ရတယ်။ လွယ်တော့မလွယ်ဘူး အစ်ကိုရေ မျှဝေပေးတာကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။
အကျွန်ုပ်သည် ကွမ်းတရာညှက်ခန့်ကြာသော် စိတ်ဆိုးပြေတတ်လေသည်။ ကြာကြာ စိတ်ဆိုးရမှာ ပျင်းသောကြောင့်တည်း။
My sis named me"daw tha ku ma ya".
I'll do that and ths for sharing.
May you be out of flower garden soon:D"
1234567 8910 J Q K Joker :)
၁ ၂ ၃ ၄ .......၊အင်း......၁ပဲရှိသေးတယ်..ဒေါသက
၁ ၂ ၃ ၄ ......ဟင်းးး
စာပေဟောပြောပွဲသွားပြီးရင်လည်း ရှယ်ပါဦးဗျို့ 
ဟုတ်တယ် စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေတုန်းက ချက်ခြင်း မဆုံးဖြတ်ဘဲ အချိန်နည်းနည်းစောင့်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးဘဲ..
အချိန်နည်းနည်းလေးစောင့်ပြီးမှ ဖြေရှင်းရင် အမှားနည်းတယ် ကိုယ်တွေ့ပါ။
ဒါနဲ့ ပန်းသံသရာက ထွက်ပြီလား.. ဟင်းတောင် မဝယ်စားဘဲ ငပိထောင်းလေးနဲ့ စားပါတယ်ဆို ပိုက်ဆံ၈၀ထွက်သွားပါလား..
မောင်မျိုး သနားပါတယ်..း)
ဟုတ်ကဲ့... စိတ်မဆိုးတော့ပါဘူး... :D.. ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါပြီ... :P
ဒေါသထွက်ရင်း ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ဖက်သားအတွက် ခံရခက်သလို ကိုယ့်အတွက်လည်း အရှုံးဖက်တယ် မောင်မျိုးရေ။ စိတ်ကိုပြေလျော့စေတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် တစ်ခြားသူတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်မယ်။ ကျေးဇူးပါနော်။
ဆရာတို့ကျတော့ ၁ ၂ ၃ ၄ လောက်နဲ့ မလုံလောက်ဘူးမောင်မျိုးရေ ၁၀ အထိရေမှ တော်ကာကျတယ်...အဲသလို စိတ်ရှည်တာရယ်...
၁၂၃၄ ရေရုံနဲ့ မရတော့ရင် ၁၀၀ ကနေ ၉၉၊ ၉၈၊ ၉၇ နောက်ပြန် ပြန်ရေရမယ် ထင်တယ်ဗျ၊ ပိုပြီး စဉ်းစား နေရတာနဲ့ စိတ်ဆိုးပြေသွား နိုင်လောက်တယ်..၊း)
စာပေဟောပြောပွဲ ကြော်ငြာ တွေ့တုန်းက ညီ့ကိုတောင် သတိရသေးတယ်၊ ဒီဆရာလေးတော့ စာရေးဆရာ တွေနဲ့ တွေ့ရမှာ ကံကောင်းတာပဲ-လို့..၊ ပြန်ဝေမျှမယ့် ပို့စ်တွေကို စောင့်နေမယ်ဗျာ...။
ဒီနည်းလေး မဆိုးလောက်ဖူး သုံးကြည့်ဦးမယ်...
အစ်ကိုလဲ ထစ်ကနဲဆိုရင် ဒေါသနဲ့ ပြန်ပြန်တုံပြန်တတ်တာ အကျင့်ဖြစ်နေပြီ...
ဘာသာစကား၃မျိုးနဲ့ ချာလပတ်ယမ်းနေမယ့် မောင်မျိုးကို မြင်ပြီး ပြုံးနေမိတယ်..:) စာပေဟောပြောပွဲ ပြန်ရေးပါဦး...
အိပ်ယာ.... မလွယ်တာတော့ အမှန်ပဲ အစ်ကိုလည်း ရေးသာရေးတာတစ်ခါတလေ ၁၂၃၄ မရေမိဘူးဗျ ။
အစ်မ... အဲံ့တာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တာပေါ့း)
ကြီးတော့် ... ပန်းတာပျောက်ပြီင်္ ဟဲဟဲ ဆုတောင်းပေးတာကျေးဇူး ။
ကိုအေအိတ်.... ကုလား ပါသေးလား
ကိုညိမ်း.. တူတူပါပဲဆို လူရှိန်အောင်သာရေးနေတာ ကိုယ်လည်း ထောင်းခနဲ ခဏခဏဖြစ်တယ်း)
ဘလက်စ် ...း))) ဟူးးး
မစိန်းထွန်း... အစ်မရေ့ ကျနော် ဓာတ်ပုံတွေ သေချာမရိုက်ခဲ့ရဘူး အားနာလိုက်တာ လူတွေ တအားတိုးနေလို့လေ ။
မချော...ဟုတ်တယ်မချောရေ့တစ်ခါတလေ ကိုယ့်အသက် ကိုယ်ပြန်တွက်ပြီး မဖြစ်သင့်သေးပါဘူးလေဆိုတဲ့ အတွေးတွေ ခဏခဏ၀င်တယ်ဗျ ။
နေ၀သန်..... လူကြီးကြီးကျလို့ ရုပ်က
တီတင့် ...ကျေးဇူး ဗျာ ကိုယ့်အတွက်လည်း အရှုံးဖက်တယ် ဆိုတာလေးလည်း ကျနော် မှတ်သားသွားတယ် ။
ဆရာဟန်... ဆရာက စိတ်ရှည်မှာပါ ကျနော် မှန်းကြည့်သလောက်တော့ အဟုတ်ပြောတာ ။
ကိုညီ... အစ်ကိုကောပဲ ကျနော်ထင်တာတော့ အစ်ကို သိပ်တည်ငြိမ်ပြီး ခေါင်းအေးအေးနဲ့ ဖြေရှင်းမယ့်သူမျိုးလို့ ယုံတယ်း) စာ အသွားအလာ အရေးအသားကိုကြည့်ရုံနဲ့ မှန်းတတ်တယ်ဆိုရင် အစ်ကို့ညီ သိပ်များ လေကြီးသွားလေသလားး))
ကိုညီရဲ ... သုံးကြည့်ဗျ ခက်ပေမယ့် တော်တော် အသုံးဝင်တယ် ။
မမြသွေးနီ .. တိုင်ကတော့ပတ်နေတာပဲ အစ်မရေ့ စာပေဟောပြောပွဲအကြောင်းရေးဖို့ ကျနော့်မှာ အချက်လက်မစုံဘူးဗျ နောက်ကျမှရောက်တော့ ဓာတ်ပုံရိုက်တော့လည်း အဆင်မပြေဖြစ်နေတာနဲ့ ။
သံဇကာကွက်လေးနဲ့ ပုံကို ငါလဲခံစားမိတယ်။
ခံစားမှုကို ဘောင်ခတ်၊ ပိတ်လှောင်စေတာတွေကတော့ ပြောကိုမပြော ချင်တော့ပါဘူးလို့ပဲ ပြောရတော့မလို။
ငါ ဒီမှာအပင်လေးတွေ စိုက်ဖြစ်တယ်လေ။ ပန်းပင်လေးတွေ။ အဲ့ဒီပန်းပင်လေးတွေ တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားလာတော့ ငါက အိုးပြောင်းပေးရမှာလား၊ ဒီအတိုင်းပဲ ပစ်ထားလိုက်ပြီး အမြစ်တွေမထွက်နိုင်ဖြစ်ပြီး သေသွားတာကို ကြည့်နေရမှာလား။ ...အဲ့လိုအတွေးတွေနဲ့ဆိုတော့ ဘာလို့လဲတော့မသိဘူး။ စိတ်တွေအခြေမကျလို့များလားတော့ ထင်မိတယ်။
နင်ကတော့ စာတွေရေးလို့ကောင်းဆဲပဲနော်။ အမြဲမလာဖြစ်ပါဘူး။ တခါတခါလာဖတ်ရင် တသောကြီးပဲ ဖတ်ရတာ။ ဆက်ရေးပါ။ အမြဲအားပေးနေတယ်။